Fantaro i Daniel Abugre Anyorigya, mpikatroka ho an’ny fiteny Gurene · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Daniel Abugre Anyorigya, mpikatroka ho an'ny fiteny Gurene
Voadika ny 09 Jona 2022 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Esperanto , English
Sary nomen'i Daniel Abugre Anyorigya. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra ireo fiteny afrikàna aty anaty habaka nomerika, tianay ny hanasongadina an'i Daniel Abugre Anyorigya (@danyorigya) avy ao Ghana.
Daniel dia mpiteny ny Gurene (fantatra koa amin'ny hoe Frafra). Araka ny voalazan'ny Ethnologue, mihoatra ny 700.000 ireo mampiasa io fiteny io ao Ghana sy Burkina Faso. Ny asany dia nifantoka tamin'ny fanohanana ireo tetikasa Wikimedia amin'ny fiteniny. Vao haingana ny Rising Voices no nitafa tamin'i Daniel tamin'ny alàlan'ny imailaka mba hahafantarana misimisy kokoa momba ny vinany mikasika izay fomba atao hahazoan'ny fiteniny toerana eny anaty habaky ny aterineto.
Rising Voices (RV): Azafady, mba lazalazao anay ny momba anao.
Daniel Abugre Anyorigya (DAA): Izaho dia Ghaneàna mpanao gazety, mpiaro tontolo iainana ary mpiara-manorina ny vondrompiarahamonina Wikimedia amin'ny fiteny Gurene.
Ny vondrompiarahamonina Wikimedia amin'ny fiteny Gurene dia rantsana iray an'ireo indizeny miaraka amin'ny Orina Wikimedia. Tanjony ny haneho amin'ny fomba nomerika ny fiteny Gurene, izay fitenindreny ampiasain'ireo olona monina ao Tôgô, Ghana, sy Burkina Faso.
RV: Ahoana izao no toerana misy ilay fiteninareo ety anaty aterineto sy ivelany?
DAA: Ampianarina any amin'ny Anjerimanontolon'ny Fampianarana, ao Ajumaku, ny fiteny Gurene. Eny anaty habaka nomerika indray dia trandrahana ao amin'ny Wikipedia sy amin'ny fampiharana Khaya izy.
Inona no manosika anao hanao izay hahitàna ny fiteninareo eny anaty habaka nomerika?
DAA: Mivoy ny kolontsainay ilay fiteny. Noho izany, mba hisorohana ny fanjavonany sy hiantohana ny fitomboany, nataonay ny famadihana ilay fiteny ho amin'ny endriny nomerika.
RV: Farito ny sasantsasany amin'ireo fanamby manakana ny fiteninao ho tsy afaka ampiasaina feno ety anaty tambajotra.
DAA: Amin'izao fotoana amoahana ny lahatsoratra izao, tsy mbola afaka hita any amin'ny sekoly fanabeazana fototra ilay fiteny; araka izany, miantraika amin'ny kolontsainay io.
RV: Inona no dingana mivaingana heverinao fa azo atao mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteniny na hanohizany hampiasa ny fiteniny?
DAA: Mandalo fotoana iray izay misy fihitaran'ny rakibolana izao ilay fiteny, mba hiantohana ny fampitàna mahomby sy ny fanoratana azy.
Mediam-bahoaka 6 andro izay
Fanontaniana & Valiny niarahana tamin'i Silvia Cebolla, mpikatroka ho an'ny fiteny Aragonezy